Abohimiadana - Wikipedia
Isam-ponina 22 653 mponina
Abohimiadana dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan' Andramasina, Faritanin'Antananarivo, 75 km miala ny renivohitra.
4 Vokatry ny fambolena
Ny isam-poniny dia 22653 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000.
Ahitana fokontany 18 ny kaominina. Ao amin'ny fokontany Manandriana no misy ny farihin'i Tsiazompaniry. Ny kaodin-kaominina dia 11509 ary ny kaodin-distrika dia 115
Andriamaheritsialaintany avy any Antanamalaza Vakiniadiana (Manjakandriana) no voalaza ho namorona tanana tao amin'ny vohitra iray antsoina hoe Bevaha. Nisy kamory sy loharano tao, ary najarian'ny mponina ho lasa tatatra ka nanjary tsy ory rano ny mponina. Namporisika ny vahoakany hiasa mafy ny mpanjaka. Ny olona manodidina izay nahitany fiadanan'ny mponina tao no niavian'ny anaran'ny tanana hoe Ambohimiadana.
Tamin'ny 1902, mbola andron'ny fanjanahantany, dia renivohitry ny Canton Ambohimiadana talohan'ny namindrana ny renivohitra ho ao Anjoma Faliarivo. Niova ho commune rurale izany, dia niova ho firaisam-pokotany ary niverina ho commune rurale indray ankehitriny.
Ny anjaran'ny tantsaha mampiasa zezika simika dia >75%. Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia vary. Ny zava-bolena lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia vary. Ny entana fahatelo lafo vidy indrindra dia haricot. Ny isan'omby dia 3075. Ny isan'ny taona nisiam-pesitry ny vorona teo anelanelan'ny taona 1999-2001 dia 3. Ny zava-bolena faharoa lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia mangahazo. Ny entana lafo vidy indrindra dia pomme de terre. 25 isan-jaton'ny tanimbary no voatondraka amin'ny tohidrano na paompy. 95 ny mponina no miasa tany. 0 ny mponina no miasa amin'ny fanjonoana. 4 ny mponina no miasa amin'ny sampandraharaha. 1046 no isan'ny kisoa.
Tongavan'ny lalam-paritra ilay tanàna. Ahitana tobim-pahasalamana ao. Misy tsena isan'andro any. Ijanon'ny taksiborosy ilay kaominina. Misy fianarana ambaratonga faharoa (lise). Ahitana sekoly ambaratonga fototra. Ahitana orinasa mampiasa olona latsaky ny folo. Ahitana kolejy ao amin'ilay tanàna. Tsy ny JIRAMA no manome ny rano. Misy biraom-paositra ao.
Ny fitaovam-pitaterana ampiasaina matetika indrindra dia fiara lehibe. Ny faharetan'ny dia mankany amin'ny renivohi-paritany dia 8 ora. Ny fotoam-pitaterana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny andro fahavaratra dia 8 ora. Ny lalan-tany dia azo aleha mandavan-taona. Ny saran-dalan'ny olona tokana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny andro fahavaratra dia 20000 Fmg. Misy fikambanan'ny mpampiasa lalan-tany ao. Ny saran-dalan'ny olona tokana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny haintany dia 20000 Fmg.
Ny isan'ny vono olona tanatin'ny taona 1999-2001 dia 2. Tapaka in-1 ny lalana tao anatin'ny taona 1999-2001. Ny isan'ny vakitrano tanatin'ny taona 1999-2001 dia 12. Ahitana zandary ao amin'ilay kaominina.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Abohimiadana&oldid=798288"
Voaova farany tamin'ny 7 Febroary 2017 amin'ny 15:13 ity pejy ity.